Uye Zvino kune Rima Rutivi rweB2B Zvemukati Kushambadzira | Martech Zone
Sezvo kambani inoshandisa zviwanikwa zvinodiwa kuti ive nehunyanzvi hwekushandisa zvemukati, dzimwe nguva mari yakaoma kumedza sezvo ichida kuwana simba uye chiremera muindasitiri yavo. Ivo zvechokwadi havana chero sarudzo kunze kwekutenga inodhura inotungamira kuburikidza nekushambadzira uye yakabhadharwa yekutsvaga zvirongwa. Uye iyo yekumirira haisiriyo yega dambudziko - iyi infographic kubva kuScripted inonongedza akati wandei mamwe matambudziko asi inopa dzimwe tarisiro nzira dzekukunda nadzo.
Sezvo zvemukati kushambadzira kuri kuramba kuchikwira mukuzivikanwa mune yega indasitiri, vazhinji vatengesi vari kutarisa kukosha kwainogona kuunza patafura. Ichokwadi, zvemukati kushambadzira inzira yakanaka yekusvika kune vateereri vatsva, kuburitsa chiziviso cherudzi, kudzidzisa vatengi uye nezvimwe - asi zvakare zvinogona kukuvadza nzira yekutengesa, kunyanya kana isina kuitwa nenzira kwayo. Nicole Karlis, akanyorwa
Hafu yevatengesi vese havana zvakanyorwa zvemukati zvekushambadzira zano uye 62% vanofunga kuedza kwavo kuri zvisina basa. Ehe, 21% haisi chaizvo tambo chii kudzoka kwekudyara uye zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvemukati zvakagadzirwa zvinonyatsoburitswa. Chinyorwa chinopa nzira sere dzekudzivirira aya matambudziko - kubva pakunyora yako yemukati nzira, kugadzira zvirimo karenda ine zvinoenderana kuburitsa, kumisikidza zvinangwa, kuongorora vateereri vako, uye kudzokorora izvo zviri kushanda.
Tarisa uone zvese zvakadzama mune ino infographic uye tinya-kuburikidza kuti upfuure kune rakanyorwa blog uko kwavane toni yezvishandiso kwauri kuti uvandudze yako zvemukati kushambadzira zano uye kuuraya!
Tags: b2bb2b zvemukati zvekushambadzirab2b zvemukati zvekushambadzira zvinetswazvemukati zvinonetsa